Fikarohana momba ny firaisana Fiverenana ny fisandratana na fiverenana amin'ny fiainana an-davanandro - Fampidirana - Fikarohana momba ny fanambadiana vatana
Famerenana ny Fahatongavana ho nofo na ny fiainana an-davanandro
Fiaingana ny fisandratana na ny fiainana an-dalampandrosoana voafaritra
Nitady fialamboly tsy miankina amin'ny fanjakana izy ireo, anisan'izany ny maro narahina Ian Stevenson, MD, asehoy fa ny fanahy iray dia mety hanome aina vatana hafa mihoatra ny iray amin'ny fotoana iray. Ian Stevenson dia niantso ireo tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray mandritra ny androm-piainan'ny fiainana mandritra ny androm-piainany satria "tranga misy daty anomaly."
Ataoko hoe "fahatongavan'ny nofo nofo" io fisehoan-javatra io. Izaho dia miresaka olona roa izay avy amin'ny fanahy iray ihany, izay tonga nofo tonga nofo miaraka, ho "misaraka". Ny "fiainana parallèle" dia teny taloha iray izay nampiasaina mba hilazana ny fisehoan'ny fisarahana tonga nofo miaraka. Namorona ny teny hoe "fisarahana" tamin'ny taona 2000 aho.
Ny karazany hafa amin'ny fahatongavan'ny nofo ho nofo dia rehefa velona ny olona iray ary miaraka amin'izay koa, ny fanahin'io olona io dia namelona foetus izay ho teraka amin'ny ho avy. Amin'ity tranga ity, ny olona iray sy ny zaza ao am-bohoka ho an'ny nofo ho avy dia misy amin'ny fotoana iray ihany.
Ahoana no fiasan'ny fahatongavan'ny nofo ho nofo? Na dia tsy fantatsika tsara aza, azontsika atao ny mieritreritra ny fahatongavan'ny nofo ho nofo mitovy amin'ny fomba ahitan'ny fitaratra fizarazaran-jiro ho tara-pahazavana roa na maromaro. Toy izany koa, ny fanahy dia afaka mamoaka taratra hazavana na angovo maodely mihoatra ny iray ho nofo nofo indray mandeha.
Azontsika an-tsaina ny fisarahana roa ho toy ny sandry roa an'ny olombelona. Ny sandry tsirairay dia samy manana ny fisiany, fa ny sandry roa kosa dia fehezin'ny ati-doha na saina iray. Amin'ny fahatongavana nofo, afaka mahita fizarana roa isika ho toy ny appendage roa amin'ny fanahy. Firy ny fisarahana azon'ny fanahy atao eo amin'ny tontolon'ny vatana amin'ny fotoana iray? Araka ny resahina ao amin'ilay fizarana, Soul Evolution, dia inoana fa ny isa ambony indrindra dia fito, na dia tsy fahita firy aza ny isan'ny fisarahana amin'izany.
Fanafody Reincarnation miaraka amin'ny Split Incarnation